हट स्टोन मसाज - अन्तर्वार्ता - नारी
हट स्टोन मसाज के हो ?
हटस्टोन मसाजका फाइदा के–कस्ता छन् ?
कस्ता व्यक्तिहरूले हट स्टोन मसाज लिनुहुँदैन ?
ज्वरो आएका, छालाको एलर्जी भएका, गर्मी जिउका, भर्खरै अपरेसन गरेका, गर्भवती आदिले यो नगर्दा नै बेस हुन्छ ।
के–कस्ता समस्याका लागि यो उत्तम मसाज हो ?
विशेषत: चिसोले संक्रमण गर्ने शरीर भएका मानिसहरूका लागि फाइदाजनक हुन्छ । त्यसबाहेक दम, बाथ, जोर्नी दुख्ने र करकर खाने समस्या भएकाहरूका लागि यो मसाज अत्यन्तै उपयोगी छ ।
- प्रबन्ध–निर्देशक, अमृता वेलनेस, बडी एन्ड सोल
पहिले भन्दा काम गर्न सहज फाल्गुन २७, २०७५